Message from Sudhir Kumar Jha – Vidhya Sanskar H.S. School
Message from Sudhir Kumar Jha
Home Vidhya Sanskar School Message from Sudhir Kumar Jha
आदरणिय मान्यजन तथा संचारकर्मी मित्रहरु
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा चेल्सी इन्टरनेसनल एकेडेमी आपैmमा एउटा स्थापित नाम हो । शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न विषयमा दक्षता हासिल गरेका अनुभवी युवाहरुको विचार मन्थनबाट सुरु भएको यस संस्थाले पूर्व प्राथमिक– देखि कक्षा १० सम्म र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको ए–लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा सुलभ खर्चमा प्राप्त गरी यस संस्थाबाट उत्तीर्र्ण विद्यार्थीहरु हाल अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
२०६१ सालमा औंलामा गन्न सकिने विद्यार्थी संख्याबाट आफ्नो यात्रा प्रारम्भ गरेको चेल्सी हाल आएर १५५० विद्यार्थी तथा २६० शिक्षक कर्मचारी र ती १५५० विद्यार्थीका अभिभावकहरूको एउटा ठुलो परिवार बनिसकेको छ । के आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामी सबैको यात्रा सजिलो थियो त ? सबैले अनुमान लगाउन सकिन्छ , त्यो पक्कै पनि सजिलो थिएन । अटल विश्वास, शिक्षक कर्मचारीहरूको अथक मिहिनेत, विद्यार्थीहरूको लगन, पत्रकार, सञ्चारकर्मीको सहयोग सुझाव र हाम्रा शुभ चिन्तकहरूको प्रेम र सद्भावले हामी आजको परिस्थितिमा आइपुगेका हौं । यो यात्राको दौरानमा सँगालेका तिता मिठा अनुभवहरूले हामीलाई सदैव अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरह्यो । फलस्वरुप आज चेल्सी विद्यालय र ए–लेभल शिक्षा क्षेत्रमा देशकै अग्रणी स्थानमा उभिन सफल छ । यो १० वर्षमा ए–लेभलमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरकै उत्कृष्ट नतिजा, प्रवेशीका परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा, विद्यार्थी तथा विद्यालय परिवारको अतिरिक्त क्रियाकलाप र सामाजिक कार्यक्रममा संलग्नता इत्यादिले हाम्रा सफलताहरूलाई सजिलै पुष्टि गर्छन् ।
स्थापनाकालदेखि नै अन्य शैक्षिक संस्थाभन्दा केही हदसम्म भएपनि यस विद्यालयले आपूmलाई पृथक राख्न सकेको छ । चेल्सी इन्टरनेसनल एकेडेमीले अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक स्तरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य कुरो होइन । हामी चाहन्छौं, हाम्रा विद्यार्थीहरू विश्वका कुनै कुनामा रहे पनि सफल रहून् । यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर शुरुवातदेखि नै हामीले हाम्रा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरेर बालमैत्री बनाएका थियौं । कक्षा कोठामा सीमित विद्यार्थी संख्या, दक्षता तथा बालमैत्री भावना भएका शिक्षक–शिक्षिका, प्रशस्त अतिरिक्त क्रियाकलाप आदिका कारण अभिभावकहरू सदैव सन्तुष्ट रहेको पाइन्छ ।
पाठ्यक्रमले मानिसको सही जीवनमा प्रयोग हुने शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यार्थीहरू कक्षाकोठाको काल्पनिक संसारमा रमाइरहनुभन्दा पनि सही संसारमा बाँचेको हुनुपर्छ, जसलाई अत्यन्त नियन्त्रित र लादिएको पढाउने शैलीबाट टाढा लगेर गर्न सकिन्छ । सही शिक्षाले एउटा बालकलाई सामाजिक, सिर्जनशील, मेहनती, सहयोगी र निडर बनाउँछ । सही शिक्षाले मानिसको विकाससँग समायोजन गर्दछ । विद्यार्थीहरूले आफैले सिक्ने क्षमताको बृद्धि गर्नुपर्दछ । बच्चाको सुनौलो भविष्यका लागि अभिभावकहरुको ठुलो उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ । हरेक अभिभावकले आफ्नो बच्चाको इच्छा र क्षमतालाई ख्याल गर्नुपर्छ । बच्चाको सिकाइलाई आफ्नो कतबतगक कथmदय िबनाउनु हुँदैन । के पढाउँछौं र कसरी पढाउँछौं, त्यो सबभन्दा महत्वपूर्ण छ । आजको कक्षा कोठा भोलिको समाज हो । अतः गुणस्तरीय शिक्षाबाट नै समाजको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
राज्यले निर्धारण गरेको नीति नियममा रहेर सबै शैक्षिक संस्थाहरु चलेका हुन्छन् । निर्दिष्ट लक्ष्यका लागि नीति मूल मार्ग हो । स्पष्ट र सफा मार्गबाट नै कुनै विघ्न बाधा बिना लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । नेपालको शैक्षिक विकासका लागि बनेका नीतिहरुका बारेमा टिकाटिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हामी निजी शैक्षिक संस्थाको प्रतिनिधि पात्र भएकाले आफ्नो मनमा लागेका कुरा भन्न खोजेको हुँ ।
हामीले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्राय देख्दै र सुन्दै आएको कुरा हो “नीति अत्यन्त राम्रो हो तर त्यो सफल रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।” अतः नेपालमा नीतिहरु निर्माण भए पनि सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यसको कार्यान्वयनमा रहेको पाइएको छ । यसमा को दोषी छ, त्यो पक्कै पनि बहसको विषय होला । असफल नीति कार्यन्वनका कारण शिक्षा क्षेत्रमा अनगिन्ती चुनौतीहरू दिन प्रतिदिन थपिँदै गएका छन् । सरकारको साक्षरता अभियान औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा बिचको भेदभाव, विद्यालय व्यवस्थापनको अभिभारा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नु , पूर्व प्राथमिक शिक्षामा सरकारको स्पष्ट धारणा नहुनु , अझै पनि सबैको पहँुचमा प्राथमिक शिक्षा नहुनु निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई एउटै नीतिमा राख्नु खयअबतष्यलब िभमगअबतष्यल इत्यादि जस्ता चुनौतीहरू टड्कारो रुपमा छन् । धेरै कुरा एचभकअचष्उतष्खभ छन् ।
नेपालको शिक्षा नीति निर्माण समयसापेक्ष नभएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । अझ विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा सुनिने गुनासाहरू ज्यादा छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गरिनु । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अँगाले पनि विद्यालयहरूलाई पाठ्यक्रम, शिक्षक छनौटजस्ता विषयमा स्वांयतता नदिनु, नीति निर्माणमा सरोकारवालाहरूलाई समेट्न नसक्नु । यी विषयले सफल नीति निर्माण र त्यसको कार्यन्वयनमा शङ्का जन्माउँछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो देशको अवस्था अनुरुप जन्मेका निजी शैक्षिक संस्थाले ओगटेको हिस्सालाई हेर्ने हो भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई “पार्टनरको रुपमा लिन सक्नु पर्दथ्यो तर हुन सकिरहेको देखिएन ।
मैले अगाडि नै भनिँसके, राज्यले निर्दिष्ट गरेका नीति नियम नै लक्ष्यमा पुग्ने मार्ग हुन् । यस्तै नियमका सन्र्दभमा नेपालमा सञ्चालनमा रहने कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको नाममा नेपालीपन झल्कनुपर्ने हुनेछ भन्ने रहेको छ । राज्यको सो नियमलाई शिरोधार्य गरेर हाम्रो विद्यालयले कक्षा नर्सरीदेखि दससम्मको साविकको नाम “चेल्सी इन्टरनेसनल एकेडेमीलाई” परिवर्तन गरी “विद्या संस्कार स्कुल काठमाडौ” राखिएको कुरा फेरि पनि जानकारी गराउँन चाहन्छु । म आज उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यो नाम परिवर्तन हामी कुनै करकापमा नपरी एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । नाममा भन्दा काममा विश्वास राख्ने हामी सबै यो नयाँ नामलाई सबैको प्रिय बनाउन सदैव कटिबद्ध रहनेछौंँ । “विद्या संस्कार” नाम आफैंमा काफी छ हाम्रो भिजनलाई दर्शाउन । अत ः सुसंस्कृत शिक्षा प्रदान गर्न हाम्रो टिम अहोरात्र खटिइरहने छ ।
यस चेल्सी इन्टरनेशनल एकेडेमीले आफ्नो एक दशकको यात्रामा आफ्नो नाम स्थापित गर्न सफल भैसकेको छ । अब आगामी दिनहरूमा आफ्नै शैक्षिक कार्यक्रमको परिधि बढाउनका लागि हामी लागिसकेका छौं । विध्यमान कार्यक्रमलाई निकट भविष्यमा उच्च माध्यमिक तह, बिबिए, एमबिए लगायतका उच्च शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यस चेल्सी इन्टरनेसनल एकेडेमी प्रा .लि. एउटा विशुद्ध शैक्षिक गृहको रूपमा विकसित हुँदै जानेमा हामी विश्वस्त छौं ।
अन्त्यमा यस एक दशकको यात्रामा हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
यहाँहरुको दिन शुभ वितोस्
Principal, Founder Director
Valley Taekwondo Championship organized by Sagarmatha Boarding School
Under 12 Futsal Tournament organised by Apex Life School winner Vidya Sanskar School
CIE Examination Timetable-GCE Nov 2016 Session, Kathmandu